Polo Shirt - Uthando emhlabeni wonke.
Polo ihembe - uhlobo sweatshirt nge collar, izinkinobho ezimbili noma ezintathu, imikhono esifushane, futhi cuffs enwetshiwe. Namuhla, i-polo uyisibonelo ezemidlalo, ngisho kwansuku ehhovisi bafake.
Kunemibono eminingana ngokuphathelene nemvelaphi le ethandwa futhi abathandwa amahembe eziningi. On omunye wabo, wadala polo amahembe lokuqala okwakukhona kulo British, ngubani a aphansi ijezi elula madoda izinkinobho Ithungelwe ithuba phansi collar futhi imikhono usike bafike endololwaneni. Isetshenziselwa ukuthunga izingubo zangaphansi mncane ijezi wathungela. Uma omunye wabadlali waya kulo mqhudelwano polo kule ihembe. izingubo ezinjalo kwaba elula kakhudlwana futhi ngokushesha saba ngaphansi ngokuvamile ayibonwa. Yingakho igama "polo ihembe" imodeli.
Enye inguqulo ye imodeli umsuka uxhuma ngayo igama ezidumile French ithenisi umdlali Rene Lacoste, ngubani ngo-1933 wasungula inkampani yakhe ukwenziwa polo amahembe zikakotini Pique.
Polo ihembe has ezintathu brand edume kakhulu: Lacoste, Polo Ralph Lauren, Fred Perry.
I eqinile French Lacoste eyasungulwa Rene Lacoste, kusukela ngo-1933 ukhiqiza polo amahembe nge logo "ingwenya" (okuthiwa ithenisi-fashion cindezela American). Ngu kwesokudla yethenisi lokuqala emhlabeni Rene Lakost waba Yokuvukela womshini nezemidlalo abadlali ithenisi. Shirts zenziwa yokukhanya ukotini Indwangu wathungela ezenziwe eNgilandi, lapho kwaba esikahle futhi zikhululekile ngesikhathi sokushisa. Akazange kudingeka unhlangothi, kwadingeka ezomile kuphela, ngaphandle eguqa. Lokhu ihembe ngokushesha baba lwentando isitayela kakhulu ehloniphekayo hhayi kuphela tennis, kodwa abadlali kanye amatilosi, futhi ekugcineni polo ihembe inkampani Rene Lacoste wayezazisa imibuthano ephakeme yeYurophu hhayi kuphela, kodwa futhi zaleli zwekazi American. Namuhla, i-Lacoste inkampani has ihhovisi omele eMoscow eziningi izitolo brand eRussia. Wenza izingubo, izibuko, amawashi, amakha.
Enye inkampani wenze igama bona "polo ihembe" imodeli, ngokusekelwe futhi umdlali ithenisi. Lokhu sportmen IsiZulu Fred Perry, niqinisiwe forties ka elidlule leminyaka ihembe edition nge edging elikhanyayo esiphikeni futhi cuffs, okuyinto eyaba lwentando polo amahembe Fred Perry. Ihembe lokuqala Kwasakazwa ngamazwe ithenisi tournaments, okuyinto akuvumelekile ngesikhathi esifushane zavovevat uthande intsha ngesiNgisi. Namuhla, le nkampani Fred Perry uyaqhubeka ukubamba isikhundla okuholela ukukhiqizwa polo amahembe.
Ukhululekile futhi stylish American-isitayela polo ihembe uvele 1972 kusuka umsunguli inkampani Polo Ralph Lauren - ongowokuzalwa Belarus Ralfa Lorena (Lifshitz). Wethula i-polo tshirts 24 imibala, okuyizinto namanje at isiqongo ukuthandwa. Ilogo ihembe Polo Ralph Lauren waba uwuphawu indoda engokomfanekiso egibele agijima. Ralf Loren isungule polo imfashini umugqa kokubili amadoda nabesifazane sika.
ERussia, ihembe polo usuthandwa kusukela maphakathi nawo-seventies, nenqwaba ukukhiqizwa ezifuywayo imodeli uye azikakwazi. Lezi amahembe ngasizathu simbe waqamba igama funny "Bobochko".
Namuhla, i-polo ubizwa kufanele has a isilinganiso okusezingeni eliphezulu. Ubukeka omkhulu kokubili ibhizinisi kanye ngokwethukela. It zamila ukuqina bese ngiba omunye imodeli yebhizinisi. Osopolitiki kanjalo nezinsephe osomabhizinisi, umsubathi TV, amadoda wayesemncane futhi eyigeza ngeke akwenze ngaphandle in ikhabethe lakhe stylish polo amahembe.
Njengamanje, izinkampani Russian babe abasebenzi babo bagqoke polo amahembe nge ilogo yenkampani. Lezi amahembe iphelele njengezinto eziyisikhumbuzo.
Ububanzi ikhulisa ihembe. Ngaphezu onobuhle classical avele polo Ihembe izinqumo design: ihembe nge uziphu, Ihembe ezivuzayo zokuhlobisa noma ezinemibala ifaka oyisibonelo ezinemikhono emide noma ifomu-kufaneleka zesifazane.
Syech "Butterfly": sha, inombolo yohlobo, ukubuyekezwa
Indlela ukususa upende jeans: igxathu negxathu Umhlahlandlela
Okuqinile "Adidas": isithonjana
Owesilisa suit emhlophe: izimfihlo lezingubo ephelele
Tver Amahhotela "Park Hotel 3 *." "The Park", Tver: ikheli, incazelo, ukubuyekezwa
Drupe ezivamile - a millipede
Maka kanye elingenamikhono izingalo laseStavropol Territory: incazelo, umlando kanye nencazelo izimpawu
Izibuyekezo ze-Nissan Primera
Ukuzalwa KukaKristu the Virgin. Isithonjana lesiko iconographic holidi
Izindleko ngezandla zabo siqu - ezishibhile futhi zithukuthele!
Bird Tern: incazelo, isithombe
Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe ukugcina ulamula ekhaya? lemon eqandisiwe
Ishaja ye-emotweni webhethri izandla zakho ukwenza lula
Umdlali wasesiswini Spanish Sapater Alberto
Baghdad - inhloko-dolobha kuliphi izwe? Baghdad: ulwazi mayelana emzini, izivakashi, incazelo